कस्ता पुरुषसँग टाढा भाग्छन् महिला ? – Sawal Nepal ||The Power of Information
कस्ता पुरुषसँग टाढा भाग्छन् महिला ?
एजेन्सी २०७६ श्रावण २८, मंगलवार १५:३८ मा प्रकासित
महिला र पुरुषको सम्बन्ध एक रथको दुई पांग्राका रुपमा लिइन्छ । पारिवारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनी उनीहरुबीच सहकार्य र सद्भाव हुनु जरुरी हुन्छ । उनीहरुबीच विश्वास हुनुपर्छ ।
युवा युवतीमा यस्तो विश्वासको अभाव खड्किएको पाइन्छ । यदी कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ भने तपाईले केही आफ्नो आनीबानीमा पक्कै परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ । महिलाहरुलाई के कुरा मन पर्दैन यसबारे जानकारी लिनैपर्छ जसले भविष्यमा समस्या नआओस् ।
प्राय महिलाहरुले पुरुषका यस्ता गुणहरु मन पराउँदैनन्, जुन निम्न छन्–
आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुष
कुनै पनि महिलाले पुरुष आफैले आफ्नो औधी तारिफ गरेको फिटिक्कै मन पराउँदैनन् । आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषबाट महिला टाढा भाग्छन् ।
फ्लर्ट गर्ने पुरुष
सधैं प्रश्न गर्ने पुरुष
पुरुषहरु आफ्ना प्रेमिकाप्रति निकै सशंकित हुन्छन् । हरेक कुरामा प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । कहिले कतिबजे कहाँ गइरहेका छन् उनीहरुलाई हरेक कुराको जानकारी चाहिन्छ । चाहिनेभन्दा बढी सवाल–जवाफ गर्ने पुरुष पनि महिलालाई मनपर्दैन ।
केयर नगर्ने पुरुष
महिलालाई केयर गर्ने पुरुष निकै मनपर्छ । पुरुषको केयरिङ स्वभावले महिलालाई उनीहरुतर्फ आकर्षित गराउँछ । यसको विपरित यदि कोही पुरुषले उनीहरुको मेसेज र फोन कलको जवाफ दिएनन् भने यस्ता पुरुष महिलालाई मन पर्दैन ।
पुरुष मित्रसँग इर्ष्या गर्ने पुरुष
धेरैजसो पुरुषलाई आफ्नी प्रेमिकाका पुरुष साथीहरु मन पर्दैन । ती महिला आफ्ना प्रेमीका लागि जतिसुकै इमान्दार किन नहोस् शंका गर्न छाड्दैनन् । प्रेमिकाको पुरुष साथीसँग जहिले पनि पुरुषले इर्ष्या नै गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता पुरुषबाट पनि महिला टाढा भाग्ने गर्छन् ।
खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदै फाइदा
मुटु स्वस्थ राख्नका लागि के गर्ने के नगर्ने ? जनिराख्नुहोस